မြန်မာပြည်တွင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 297
Than Win Hlaing – Articles
သမိုင်းတကွေ့မှ နိုင်ငံခြားသားများ သန်းဝင်းလှိုင် မေ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ ● မြန်မာအကျိုးလိုလားသော ဂျေအက်စ်ဖာနီဖယ် ၁၉၁ဝ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၉ ရက် အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဘားနဒ်အခမဲ့ ပိဋကတ်တိုက် (Bernard Free Library) ၌ အသင်း၏ ပဏာမအစည်းအဝေးကို ကျင်းပကာ မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း (The Burma Research Society) ကို တရားဝင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ အသင်းကြီးတည်ထောင်ခဲ့သည့် အခါသမယမှာ ၁၀၃ နှစ် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း၏ အသက်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ် (Journal of the Burma Research Society, J.B.R.S) အတွဲ ၁၊ အပိုင်း...
နွေရာသီသင်တန်းဆင်းပြီ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၃ မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များအား နွေရာသီအချိန်ကာလတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်၍ သင်ကြားပေးခဲ့သည်မှာ (၄) ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် နွေရာသီ၌ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊4Skill သင်တန်း၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း၊ ပန်းချီရေးဆွဲခြင်းသင်တန်း အစရှိသည့် သင်တန်းများအား သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပြီး ၂၆.၅.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်၌ “သုခ” ခန်းမဆောင်ကြီး၌ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားအား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် လုပ်အားပေးအသင်းသား ဦးကျော်ကျော်မြင့်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသော မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များအား ဆရာမ ဒေါ်နီနီအေးမှ ဂိမ်းကစားပွဲကျင်းပခဲ့ရာ အနိုင်ရသူများတို့အား ဒေါ်စိုးစန္ဒာမှ ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ4Skill...
သမိုင်းတကွေ့မှ နိုင်ငံခြားသားများ သန်းဝင်းလှိုင် မေ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ● အိန္ဒိယနန်းကျဘုရင် ဗဟာဒူးရှားဇဖားရ် ပြီးခဲ့သော အပတ်က ကျနော်ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ် ဇီဝကလမ်း (ယခင်ဇဗားရ်ရှားလမ်း) ရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပါတော်မူခဲ့သော နောက်ဆုံးမဂိုဧကရာဇ် ဗဟာဒူးရှားဇဖားရ်၏ သင်္ချိုင်းဂူဗိမာန်သို့ သွားရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုမိသည်။ တချိန်က ရွှေနန်းတော်၌ မင်းစည်းစိမ်ခံစားခဲ့ရသော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ မဂိုဧကရာဇ်သည် ရေခြားမြေခြား မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရန်သူ၏လက်တွင်းတွင် နတ်ရွာစံခဲ့ပုံကို တွေးမိရင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာဘုရင်သီပေါမင်းတရား အိန္ဒိယပြည် ရတနာဂီရိ အရပ်၌ ၁၉၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ တွင် ဆင်းရဲချို့ တဲ့စွာ နတ်ရွာစံခဲ့ရပုံကို ပြန်လည်ယှဉ်တွဲ အတွေးပွား နေမိပါတော့သည်။ ဤပါတော်မူဘုရင်နှစ်ပါး၏ ဘဝကံကြမ္မာမှာ တနည်းတဖုံ ဆင်တူယိုးမှား...
Maung Luu Yae – Essay
ပေါက်လွှတ်ပဲစားတို့ရဲ့ မြစ်ဖျား မောင်လူရေး မေ ၂၆၊ ၂၀၁၃ မြပုဏ္ဏမာအဖွဲ့သားတွေနဲ့ ပြည်သူ့အငြိမ့်ဆိုပြီး ဇာဂနာ၊ ကင်းကောင်၊ ငှက်ပျော်ကြော်၊ ကုသိုလ်၊ အရိုင်းတို့နဲ့ သီးလေးသီးတို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ အငြိမ့်ကကြတယ်။ ဘယ်ရက်ကလဲတော့ မသိဘူး။ အဲဒီပွဲမှာ ဟာသတွေကို တခန်းရပ်ဆန်ဆန်ပြောရမလားမသိဘူး၊ ပျက်လုံးထုတ်ကြတယ်။ ပြက်လုံးတွေထဲမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို သရော်တဲ့အခန်းပါတယ်။ “ ဒို့အရေး ဒို့အရေး “နဲ့ “ အလိုမရှိ”ဆို တဲ့စာတမ်းတွေကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြကြတဲ့အခန်းကို အရိုင်းကဦးဆောင်တယ်။ ဇာဂနာက မီဒီယာပေါ့လေ။ အဲဒီပြက်လုံးမှာ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ အဖြစ်အပျက်တိုင်း၊ နေရာတိုင်း၊ မြို့တိုင်းမှာ ဒီလူတွေချည်းဘဲ၊ ဒီအဖွဲ့ဘဲဆိုတဲ့သဘောကိုပြတာပေါ့လေ။ လွိုင်ဇာလိုနေရာတောင် ဒီလူတွေကဘဲ လိုက်ပြနေတဲ့ သဘောပြော ထားသေးတယ်။ နေ့ရောညပါ နေရာတကာ ဒီလူတွေပါဘဲပေါ့။ စားဖို့ဘယ်ကပိုက်ဆံရလဲလို့ မီဒီယာဇာဂနာကမေး တော့...
Aung Maw – Cartoon
နောင်ဆုို ကာတွန်း – အောင်မော် မေ ၂၅၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော်၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး စာပေလက်ရာများ (ဂန္တ၀င်စာဆိုတော်ကြီးများ) သန်းဝင်းလှိုင် မေ ၂၅၊ ၂၀၁၃ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင် ရေးသားပြုစုခဲ့သော `မြန်မာစာပေသမိုင်း´ ကို ဖတ်ရှုရာမှ မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်းချုပ်နှင့် ဆရာတော် စပ်ဆိုသီကုံးခဲ့သော စာပေများကို အမြွက်မျှ ထိတွေ့သိနားလည်ခွင့် ရခဲ့သည်။ မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် `မဟာသုတကာရီ မဃဒေ၀လင်္ကာသစ်´ကို အပိုင်း (၆) ပိုင်း၊ အခန်း (၄၉) ခန်း၊ စာပိုဒ်ပေါင်း (၆၂၅) ဖြင့် တန်ဆာဆင်ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့သည်။ အဆိုပါကျမ်းကြီးကို ဆရာတော်သည် သက္ကရာဇ် ၁၂၃၃ (ခရစ် ၁၈၇၁) ခုနှစ် ရဟန်းဆယ်ဝါရချိန်တွင် စတင်ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားကိစ္စ၊ သာသနာရေးကိစ္စများဖြင့် မအားလပ်နိုင်သဖြင့် ဆက်မရေးဖြစ်ချေ။ ထို့နောက် (၃၃) နှစ်အကြာ၊ ၁၂၆၆ ခုနှစ်...
ဗြဟ္မစိုရ် ဓါး ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၃ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့၌ ပညာရေးကဏ္ဍအားတိုးမြှင့်၍ နိုင်ငံထူထောင်ရာတွင် စွမ်းအားမြှင့်သော လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချလေ့ရှိသည်။ ထိုလက်နက်အတွက် အသုံးချသော ဆောင်ပုဒ်အသီးသီးတို့ ရှိသည့်အနက် “ပညာရွှေအိုး လူမခိုး” ၊ “လက်ဦးဆရာက မိဘ၊ ဒုတိယဆရာက သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ။ တတိယဆရာက စာအုပ်စာပေ” ၊ “မိခင်၏ နှလုံးသားသည် ရင်သွေးငယ်၏ ကျောင်းခန်းဖြစ် သည်။” ၊ “ပညာသင်ရာမှာ အရှက်တရားဟာ ရန်သူပါ” ၊ “အရေးကြီးတဲ့လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကောင်းတဲ့စာပေတွေ လေ့လာရမယ်။ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေးနက်တဲ့ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးရမယ်၊ စဉ်းစား ရမယ်။ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာအမျိုးမျိုး လေ့လာရမယ်၊ လေ့ကျင့်ရမယ်။”...
သမိုင်းတကွေ့မှ နိုင်ငံခြားသားများ (လေ့ာဒ်ဒါလဟုိုစီ) သန်းဝင်းလှိုင် မေ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ၁၈၄၈ ခုနှစ် မှ ၁၈၅၆ ခုနှစ်အထိ အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ် (Governor-General of India) အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သော လော့ဒ်ဒါလဟိုစီ (The Marquis of Dalhousie) ၏ အမည်အရင်းမှာ ဂျိမ်းစ်အင်ဒရူးဘရောင်းရမ်ဆေး (James Andrew Brown-Ramsay) ဖြစ်သည်။ သူသည် ဒါလဟိုစီမြို့စားဘွဲ့ကို ၁၈၃၈ ခုနှစ်၌ ရရှိခဲ့သည်။ သူ့လက်ထက်တွင် ဒုတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ ၁၈၅၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။ စစ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းမှာ ၁၈၅၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပေါ့တာ (Mr. H. Potter) ဆိုသူက ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာအရာရှိများသည်...
မော်ဒန်းလ် စသုံးလုံး ကာတွန်း – အောင်မော် မေ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော်၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
“ဖွ” ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၃ အဆောက်အဦးတစ်ခု တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက အခြေခံအောက်ခြေအုတ်မြစ် ခိုင်မာမှုရှိရန် အရေးကြီး လှသည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုဖြစ်ရန် သန့်ရှင်းမှုသည် အဓိကကြသည်။ တိုင်းပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ထိုတိုင်း ပြည်၏ အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုတို့၏ ပူးပေါင်းစွမ်းဆောင်မှုသည် အရေးပါလှသည်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံထူထောင်မှု သည် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတို့၏ စောင့်ထိန်းရမည့် စည်းကမ်းများသည် အဓိကဖြစ်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် နာမည်ကောင်းဖြင့်ထင်ရှား၊ ကျော် ကြား၊ စံနမှုနာဖြစ်စေမည့် ခေတ်မှီတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးသန့်ရှင်းသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ အင်တိုက်အားတိုက် အားမာန်ပြည့်ဝစွာဖြင့် စတင်ချီတက်မှုကို ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ပြည်သူလူထုတို့၏အားထားရာ၊ ပြည်သူလူထုတို့တင် မြှောက်ထားသော သန့်ရှင်းသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်း...
Page 297 of 344«1...295296297298299...344»
ကာတွန်း မောင်ရစ် - ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ - Ignorant
ဘီမာပြီ .. ငြီးချမ်းပါစီ
အာရှဘာရိုမီတာ(ABS)အဖွဲ့မှ မြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု ရှင်းလင်း
ကာတွန်း ATH - ပါရီနှင့် အတူ
မောင်မောင်စိုး ● မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲနှင့် စစ်ရေးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်
သန်းဝင်းလှိုင် - အာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း - အပိုင်း (၁ဝ)
မောင်မောင်စိုး - ပြည်သူတွေပိုချစ်တဲ့တိုင်းပြည်
ကိုရာဇာ - ဦးဝင်းတင်နဲ့ဘ၀နှစ်ခုကို ငြင်းပယ်ခြင်း ( ဗိုလ်မင်းခေါင် )
Join 93,738 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month May 2018 (164) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ကျော်ဟုန်း – ဘီလူးစည်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း https://t.co/1pKvxDMJFA https://t.co/Lv6kU1Hn4F about3hours ago ReplyRetweetFavorite
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို အထွက် တိုးစေမည့် စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် https://t.co/fOwvlPT0Fe https://t.co/egJocOUq9l about3hours ago ReplyRetweetFavorite
တည်ဘွားဦး – အသည်းကွဲစက်ရုပ် https://t.co/QjiPGoiuHY https://t.co/IZiev0V593 about4hours ago ReplyRetweetFavorite
ဒါရိုက်တာပန်းချီဆရာ ၀င်းဖေနဲ့ ခေတ်ပေါ်ပန်းချီဆရာ ၄ဦးရဲ့ တဒင်္ဂ အမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲ https://t.co/xXmxqXwYqR https://t.co/6MBegX80FB about7hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့ https://t.co/HAqivf5HCO https://t.co/0DN2QoGLrT about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
Cartoon Box (3,443)